घरमा avocados कसरी बढ्न
गोही नासपाती - त्यहाँ अद्भुत विदेशी फल बारेमा चार प्रकारका छन्। अभोकाडो दक्षिण अमेरिकी मूल, परिवार Laurel पर्छ। यो सफलतापूर्वक उब्जाउ गरिन्छ ट्रपिकल र subtropical जलवायु संग व्यापक लोकप्रियता, त्यसैले धेरै देशहरूमा जित्यो छ। यसको स्वाद को reminiscent छ पाइन नट, को मज्जा प्रोटीन र तेल समावेश गर्दछ। यो फल चिनी र फल एसिड को पूर्ण अनुपस्थित छ।
तपाईं विदेशी बिरुवाहरु को एक inveterate प्रेमी हुनुहुन्छ भने, तपाईँले सजिलै घर मा avocados बढ्न सक्छ, र रूख आफ्नो ग्रीनहाउस यसको वैध हुनेछ। दुर्भाग्यवश, इनडोर वातावरण avocados वा फल, तर तपाईं एक ग्रीनहाउस वा ग्रीनहाउस छ भने, त्यसपछि blooming यसलाई हेर्न मौका छ। रूख नै धेरै सुन्दर छ, त्यसैले मात्र यो प्रयोग पूरा गर्न लायक छ।
त्यहाँ एउटा सानो चाल छ कसरी avocados बढ्न घरमा। निकटतम सुपरमार्केट मा एक पाकेको अभोकाडो खरीद। तपाईं आफ्नो शरीर, हड्डी को एक अद्भुत सलाद तयार गर्न सक्छन् र बिस्तारै हटाउन। यो सुक्खा हुनुपर्छ। तार फ्रेम को हल्के सामाग्री को पिच। यो ग्लास मा राखे। पानी क्षमता बचाव, अभोकाडो पेस्ट हड्डी मा पोख्नुहोस् र यसको भुत्ते अन्त पानी मा राखिएको थियो निश्चित गर्नुहोस्। हड्डी पूर्णतया पानी छैन जोडतोडले हुनुपर्छ। यो एक जरूरी छ। जस्तै, यो उच्च-ग्रेड जरा, कुनै पाँच भन्दा कम सेमी को आगमन। पानी स्तर सधैं मूल स्थिति मेल गर्नुपर्छ अघि हुन हुनुपर्छ।
कसरी घर मा avocados बढ्न - हामी दोस्रो हाम्रो उद्यम को चरण आउँछन्। अब हामी माटो राम्ररी तयार छ। हाम्रो माटो धेरै घटक हुनुपर्छ। सबै घटक हामी बराबर अनुपात मा मिश्रण छ। तपाईंलाई आवश्यक धरण, बगैचा माटो, भद्दा बालुवा (एक सानो कागती थप्न) र पीट। पीट नम हुनुपर्छ। अब हामी एक avocado कसरी रोपेर थाहा। सही आकार पट छनौट, माटो र डूब पिट ढाकिएको आधा मा burying। क्षतिग्रस्त जरा प्राप्त गर्न होसियार हुनुहोस्। समसामयिक हजारी आवश्यकता हो, तर धेरै माटो चिस्यान नदेऊ। रोसटक तपाईं लामो प्रतीक्षा गर्न हुनेछ।
घरमा avocados बढ्न - कुनै समस्या छैन। को सुझाव र चाल पालना, र आफ्नो रूख, बलियो स्वस्थ र सुन्दर हुनेछ। सम्झना, यो एक गर्मी-मायालु दक्षिणी बोट छ। यसलाई बारम्बार हजारी र प्रकाश को प्रशस्त आवश्यक छ। त्यसैले, एक अभोकाडो कसरी रोपेर गर्न - केवल आधा युद्ध, यो ठीक यो हेरचाह गर्न महत्त्वपूर्ण छ। युवा मार र पात गर्न प्राप्त पर्याप्त चिस्यान पानी तिनीहरूलाई स्प्रे गर्न आवश्यक छ। तपाईं हावा moisten गर्न फावडा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो उपकरणहरु एक फूल पसलमा सजिलै खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। माटो loosening पनि यो बोट को विकास मा एक लाभदायक प्रभाव छ। र वसन्त-गर्मी समयमा ट्रपिकल बाली यसको विशेष तरल मल खाद। यस मामला मा, तपाईं निकै संभावना पनि ट्रपिकल बिरुवाहरु पराउँछु गर्न बढ्छ।
तपाईं सिफारिसहरू पछि भने, र कसरी घर मा avocados बढ्न थाहा छ, परिणाम पक्कै पनि तपाईं प्रसन्न हुनेछ। घर मा, तपाईं हरेक वर्ष एक रूख replant छ। यो बढ्दै जाँदा र पट को मात्रा बढ्छ।
तपाईं भाग्यशाली हो भने, र तपाईं बस्ने सोची को क्षेत्र, त तपाईं खुला जमीन आफ्नो बिरुवा पायो बलियो रोपेर गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। तल5° C तापमान Lowering बस गर्मी-मायालु बोट मार। तपाईं जोखिम लिन निर्णय गर्छन् भने उसलाई जलवायु विदेशी बस्ने भनेर बिरुवाहरु को किसिमहरु निर्दिष्ट गर्नुहोस्। त्यहाँ जो 10-15 डिग्री सेल्सियस र धेरै सानो लागि प्रजातिहरू छन् भनेर नबिर्सनुहोस्।
कसरी घर मा avocados बढ्न हामी भन्नुभयो हड्डी sprouting द्वारा। तपाईं जमीन मा सिधै हड्डी राख्न सक्नुहुन्छ। बढ्दै लागि उपयुक्त छ कि अर्को तरिका - यो cuttings छ। केही प्रजातिहरू लागि खोप आवश्यक छ। एक पेशेवर चासो बिना यस्तो गतिविधिमा संलग्न गर्ने मानिसहरूको ठूलो संख्या शायद वहाँ छ, तर को खेती एक पत्थर देखि Avocado, धेरै अपिल गर्ने सम्भावना छ।
Perennials एक फूल ओछ्यानमा - कुनै पनि परिदृश्य को सजावट
को daffodils के हुन्? प्रजातिहरू, आफ्नो विवरण र नाम
Primula। घरमा हेरचाह
Scions र rootstocks हाम्रो उद्यान को: यो खोप दिनु गर्न सम्भव छ कि
के इन्टरनेट प्रयोगकर्ता, खोजिरहेको एक खोज इन्जिन प्रश्न "जापोरोझे को स्मारक" मा प्रविष्ट गरेर
लिंडा ली Cadwell, ब्रुस ली को पत्नी
"Lego" "स्टार वार्स संग गाढा पक्ष Subdue।" डार्थ Vader - संग्रह को हाइलाइट
को Sarmatians र तिनीहरूले के गरे को हुन्?
आफ्नो हातले मोती को कलर? हो, सजिलै!
को रोचक ऐतिहासिक तथ्य अध्ययन: मार्च 8 छुट्टी कसरी गरे
प्रोटिन जटिल: अठोट, संरचना, संरचना, संरचना, कार्य, वर्गीकरण र कैरेक्टराइजेशन। जटिल देखि फरक सरल प्रोटीन के हो?
Selbi मार्क, एक अंग्रेजी व्यावसायिक स्नूकर खेलाडी: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, एक प्रतियोगिता विजय